WeCare Health Care Servcies
Liver Transplant Kidney Transplant Coronary Artery Bypass Graft Arthroplasty Proton Therapy Bone Marrow Transplant
Home Medical Nursery
Nurse Aid BCLS Pharmacy
WeCare Baby Spa မေမေတို့ရဲ့ ဘေဘီလေးတွေသည် မေမေ့ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာနေစဉ်ကတည်းက ရေထဲမှာအဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲ ဆိုတာကို သိရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးတွေရဲ့ဘဝအစပိုင်းမှာလည်း ရေနဲ့ စောစောစီးစီး ထိတွေ့ မှုရရှိအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် WeCare Baby Spa ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။
၁လ မှ ၂နှစ် အထိ ဘေဘီလေးများအတွက် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို WeCare Baby Spa မှ ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Water Training မစခင် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။
Water Training ကို 15-30 မိနစ် အထိ လေ့ကျင့်ပေးပြီးနောက် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင် ဆီများလိမ်း၍ နှိပ်နယ်ပေးခြင်း။
နုနယ်တဲ့ ဘေဘီလေးတွေကို Water Training လုပ်တဲ့အခါမှာ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှင့် allergy မဖြစ်စေရန် တစ်ဦးချင်းသီးသန့်ရေကန်ထားရှိပေးခြင်း။
မည်သည့် ဓါတုဆေးဝါးမှ ထည့်ထားခြင်း မရှိသော ရေကန်ကို သုံးပေးခြင်း။
ရေ၏အပူချိန်ကို ဘေဘီလေးတို့အတွက် 36-37ံC သာ ထားရှိပေးခြင်း။
Water Training လုပ်ပြီးတိုင်း ရေကန်ထဲမှရေများကို လဲလှယ်သန့်ရှင်းပေးခြင်း။
Water Training ပြုလုပ်ပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
Water Trainingကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် နှလုံးသွေးကြောစနစ် အကျိုးရှိလာခြင်း
ရင်ဘတ်ပေါ် ရေဖိအားသက်ရောက်တာကြောင့် အသက်ရှူစွမ်းရည်တိုးတက်လာပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုအထောက်အကူပြုခြင်း
အာဟာရစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်လာပြီးအစာခြေစနစ် တိုးတက်လာခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်တာနည်းသွားခြင်း
အရေးပြားကနေတဆင့် အာရုံခံအင်္ဂါတွေကို နိုးဆွနိုင်ပြီးဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခြင်း
အရိုး၊ ဦးနှောက်ဆဲလ်၊ ကြွက်သားတွေကိုပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခြင်း
မိဘနဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း
ကလေးငယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေ တိုးတက်လာခြင်းနဲ့
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိလာစေပါတယ်။
ကလေးငယ်ကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
သွေးလည်ပတ်မှုနဲ့ အစာခြေစနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း
ဟော်မုန်းနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ညီမျှလာခြင်း
ကြွက်သားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ကြီးထွားခြင်းအပေါ် အထောက်အကူပြုခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိလာစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုတဲ့Water Training နဲ့ Massage ပြုလုပ်ပေးဖို့ မေမေတို့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လမစေ့ဘဲ မွေးဖွားခဲ့သော ဘေဘီလေးများ အတွက် Water Training & Body Message ကို လုပ်ပေးစေခြင်းဖြင့် ဘေဘီလေးများဧ။် ခန္ဓာကိုယ် ဖွ့ံဖြိုးကြီးထွားမှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။
အမှတ် (၇၈) ၊ မြေညီထပ် ၊ အုန်းပင်လမ်း ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
09 764 757 564
အလုပ်သိပ်များတဲ့ ဖေဖေမေမေတို့၏ သားသား၊ မီးမီးတွေကို ပြူစုစောင့်ရှောက်ရန် အကူအညီ လိုအပ်နေပါသလား?
အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ ဖေဖေမေမေတို့အတွက် WeCare Nursery Centre ( ရင်ခွင်ပိုက် ကလေးငယ် စောင့်ရှောက်ရေး စင်တာ) မှ သားသားမီးမီးတို့အား ဖေဖေ၊မေမေတို့ကိုယ်စား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါနော်။ ကလေးသူငယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီး၊ ကလေးငယ်များ ဘက်စုံတိုးတက်မှုသင်တန်းကို ပြီးစီးအောင်မြင်ထားသော သူနာပြုဆရာမများနှင့် သူနာပြု အကူဆရာမများမှ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ရင်သွေးငယ်များ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် နှင့် အနာဂါတ်တွင် ကျောင်းနေပျော်၍ လူမှုဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဝင်ဆံ့နိုင်သော သားသားမီးမီးများ ဖြစ်လာစေရန် ဖေဖေ၊ မေမေတို့မှ မိမိတို့၏ သားသား၊ မီးမီးများကို WeCare Nusery Centre တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ အသက် (၆)လ မှ (၂) နှစ်အထိ သားသားမီးမီးတို့၏ အသက်အရွယ်အလိုက်ရှိရမည့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုများကို သားသားမီးမီးတို့၏ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုများနှင့် ပူးတွဲ၍ WeCare Nursery Centre မှ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဖေဖေမေမေတို့ အဆင်ပြေ စေရန်အတွက် ကျောင်းချိန်ကို နံနက် ၈နာရီခွဲမှ ညနေ ၄နာရီခွဲထိ (တနလာင်္နေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ) သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အချိန်ပိုထားချင်ပါကလည်း ကျောင်းချိန်ကို အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ စနေတစ်ရက်ပါ ရုံးတက်ရလို့ ကလေးကို စနေနေ့ပါ အပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင် ဖေဖေမေမေတို့ အဆင်ပြေအောင်လည်း စီစဉ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ပြည့် CCTV များတပ်ဆင်ထားပြီး မိဘများမှ လာရောက်ကြည့်ရူနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ထားပါတယ်။
ရင်သွေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးပြီး လစဉ်မှတ်တမ်းများလည်း ထားရှိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ မရနိုင်သော ကစားကွင်းများကိုသာ ပြင်ဆင်ထားပေးသောကြောင့် သားသား၊ မီးမီးများ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ ကစားရင်း သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးတို့ကို ရောဂါကူးစက်မှုများမရှိစေရန် သူနာပြုဆရာမများနှင့် သူနာပြုအကူဆရာမများသည် ဆေးစစ်ချက်များ အောင်မြင်ထားသူများလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှာလည်း စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူးလို့ သတင်းကောင်းလေး ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
အမှတ် (၇၈) ၊ မြေညီထပ် ၊ အုန်းပင်လမ်း (အထက်) ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကြည့်မြင်တိုင် ဘူတာနှင့် ညဈေးအနီး
09-764 757 564, 09- 964 757 564
No. 73, Ohn Pin Street, KyeeMyinDine Township, Yangon
09 730 43351, 09 95 7304351 , 09 77 55 31783
WeCare Health Care Services
Web, Mobile, Robotic